MASHIINKA WALXAHA: QALITAANKA, QULQULKA, DHISMAHA GUDAHA - XOOLAHA
Dajinta marin-habaabinta: qaabka qalfoofka, qaabka madaxa, xubnaha gudaha
Nidaamka anatomical ee bakaylaha aad buu la mid yahay qaabka jirka ee naasaha kale, laakiin weli wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah.
Maanta waxaan eegnaa qaabdhismeedka qalfoofka, xubnaha gudaha iyo qaababka jirka ee xayawaankan.
Dharka qalfoofka ah waxaa ku jira 112 lafo, waxaa lagama maarmaan u ah ilaalinta xubnaha gudaha iyo fulinta dhaqdhaqaaqyada. Miisaanka qallalka ee dadka qaangaarka ah waa qiyaastii 10% miisaanka guud ee jirka, xayawaanka yar yar - 15%. Lafaha ka samaysan khafiifku waxay ku xiran yihiin jooniska, jilicsanaanta iyo murqaha. Qalalka khafiifka ah ee bakaylaha wuxuu ka kooban yahay peripheral iyo feker ahaan.
Ma taqaanaa? In duurka, bakaylaha ku nool yihiin wax aad u yar - kaliya 1 sano, halka xayawaanka guri mararka qaarkood waxay ku nool yihiin 12 sano.
Qeybtan qalfoofka waxaa ka mid ah lafaha addimada:
Thoracic, oo ka kooban humerus, garabka garabka, gacmaha, gacanta. Gacmuhu wuxuu leeyahay tiro gaar ah oo lafaha: metacarpal - 5, carpal - 9 farood.
Lugaha, lafaha, kuuska, lafaha iyo lafdhabarta, lugaha hoose, bowdaha, cagaha, 4 farood iyo 3 fajac.
Lafaha laabta iyo garbaha ayaa lagu xiraa dharka, taas oo u oggolaanaysa bakaylaha inay boodaan. Lugaha 'lafdhabarta' waa mid daciif ah, lugaha ayaa sidoo kale leh lafaha lafaha, sidaas darteed xayawaanka ayaa badanaaba dhaawici kara boogaha iyo lafdhabarta.
Qaybtani waxay ka kooban tahay lafaha ugu muhiimsan - dhakada iyo cawska.
Baro hilibka, hoos, iyo noocyada shinnida ee bakaylaha.
Dhismaha qolfaha faaska ah waxaa matalaya:
Madax xanuunka, oo ka kooban maskaxda iyo wajiga. Qalitaanka waxaa lagu gartaa joogitaanka lafaha lammaanaha ah ee isku xiran oo ay ku xiran yihiin calaamado. Goobta maskaxda waxaa ku jira 7 lafo, oo ay matalaan gariirka, jimicsiga, jimicsiga iyo kuwa kale. Goobta wajiga waxaa ka mid ah maxillary, sanka, maskaxda, zygomatic, lafaha kala duwan. Noocyada dhakada ayaa kor u kacday, isbarbardhigga dibedda ee lafaha kale ee naasaha kale ayaa la raadin karaa. Qaybta ugu muhiimsan ee dhakada ayaa waxaa ku jiri kara xubnaha neefsashada iyo cunista.
Jidhka waxaa lagu gartaa joogitaanka qaybta laf-dhabarka, lafta sternum, iyo feeraha. Duubka wuxuu u qaybsan yahay 5 qaybood ama kala qaybsanaan. Laf-dhabarka ee bakaylaha waa mid isbedbedeli kara, sababtuna tahay joogitaanka menisci oo ku xiraya vertebrae.
Jidhka maskax-wareerka wuxuu ka shaqeeyaa xakameynta, halka isgoysyada iyo murqaha isku xira wareega vertebrae midba midka kale.
Qaybaha ugu muhiimsan ee lafdhabarta waa:
ilmo galeenka, oo ka kooban 7 vertebrae;
Thoracic, oo ka kooban 13 vertebrae, kuwaas oo ku xiran caawinta feeraha waxayna sameeyaan xabadka, kuwaas oo ku jira wadnaha iyo sambabada;
lumbar leh 7 vertebrae;
sacral oo leh 4 vertebrae;
caudal oo leh 15 vertebrae.
Waa muhiim! Cuncaddaha hilibka hilibka ah waxay leeyihiin vertebrae ka badan inta caadiga ah, taas oo inta badan ka caawisaa jilayaasha si ay u doortaan xayawaanka saxda ah marka aad iibsaneyso.
Heerka horumarka muruqyada ee bakaylaha waxay suurogal u tahay in ay horey u sameeyaan fikradda muuqaalada muuqaalka iyo dhadhanka hilibka.
Nidaamka muruqyada ee bakaylaha waxaa matalaya:
Musqulaha jirka, taas oo ah, ka hor, ka kooban muruqyo la xariira, oo gebi ahaanba daboolaya muruqyada jirka;
murqaha jirka ee gudaha, kaas oo daboolaya muruqyada siman ee daboolaya xubnaha neefta, xubnaha jirka ee dheef-shiidka, derbiyada vascular.
In bakaylaha ku nool baqshadaha, hawshu waa mid aad u yar, sidaa daraadeed nidaamka muruqyada waxay leeyihiin myoglobin yar yar iyo sarcoplasm, taas oo keena midab cad oo casaan-cad oo hilib ah. Dhaqdhaqaaqa ugu weyn wuxuu ku dhejinayaa boogaha, sidaas darteed hilibka ayaa ka sii madow.
Bakeyaha yaryar waxa uu leeyahay nidaam muruq oo aan hoos udhicin, taas oo qaadata wax ka yar 20% miisaanka guud ee xayawaanka, isla markaana ay sii korayaan, murqaha ayaa kor u kaca oo gaaraya 40%.
Soo ogow waxa muhiimka u ah barta biyaha.
Nidaamka dareenka ee bakaylaha wuxuu ka kooban yahay:
dhexe, oo matala maskaxda iyo xangulada lafdhabarta;
xayawaanka, oo ay soo bandhigeen xididada muruqyada qalfoofka, maraakiibta iyo maqaarka.
Xuubka maskaxda ee xayawaankani waxa ay kala soocaan jeex yar yar, maskaxdu waxay leedahay saddex qaybood, oo ay u taagan tahay dhexda, taagta, darajada, mid kasta oo lagama maarmaan u ah inay qabato shaqooyin kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa mahad leh qaybta qulqulka, shaqada hawsha neefsashada iyo wareegga dhiigga ayaa la qaadaa.
Kaansarka laf-dhabarka ayaa u oggolaanaya xadhigga laf-dhabarka, bilawga kaas oo ku yaal maskaxda, iyo dhammaadka in uu ku yaallo vertebra ilmo-galeenka toddobaad. Miisaanka xudunta lafdhabarka waa 3.5 g. Goobta dushiisa waxay ka kooban tahay lafdhabarta, dareen-wareerka iyo dareen-celinta.
Baro wixii ku saabsan maqalka, indhaha, cudurrada maqaarka.
Nidaamkani wuxuu daboolayaa dhammaan geeddi-socodka jirka ee marinka dhiigga, taas oo ah, unugyada dhiigga sameeya, nidaamka lenfiga, xididdada, halbowlayaasha iyo kilyaha. Walax kasta waxaa laga rabaa inuu qabto hawlo gaar ah.
Jidhka bakaylaha waxaa ku jira celcelis ahaan 250-300 ml oo dhiig ah. Xilliga jiilaalka, xayawaanka waxaa lagu gartaa heerkulka jirka oo hooseeya, taas oo ah +37 ° C, xagaaga waa +41 ° C
Wadnaha wadanku wuxuu leeyahay 4 qol oo ka kooban laba qalab iyo labo atria. Miisaankiisu waa 7 g, booska waa xajmiga xajmiga xayawaanka. Garaaca saxda ah ee xayawaanka - 140 garaac halkii daqiiqadood.
Waa muhiim! Haddii heerkulka jirka ee bakaylaha uu kordho 3 digrii xagaaga oo gaaro +44 ° C, markaa way dhiman doontaa.
Nidaamkan jidhku wuxuu u ogolaanayaa in cuntada lagu cuno cuntooyinka ay cunaan. Wareegga buuxa - ka soo qaadashada cuntada lagu sameeyo mashiinka mindhicirka - waa saddex maalmood.
Dhalashada, bakayle wuxuu horey u leeyahay 16 ilko, geeddi-socodka koritaanka, wiiggii 3, waxaa jira isbeddel ah ilkaha caanaha ee xididada. Dadka waaweyni waxay leeyihiin 28 ilkood, kobcintoodu waxay ku dhacdaa si joogto ah noloshooda oo dhan.
Jeexyada waxay ka kooban yihiin buro waaweyn, oo loogu talagalay in ay burburiyaan cuntada adag, iyo kuwa asaliga ah, kuwaas oo lagama maarmaan u ah in la cuno cunto kale. Cuntada ka soo baxday ilkaha ayaa la geeyaa caarada, marxaladda xigta waa gaadiidka hunguriga iyo caloosha.
Bakeyle waa xubin bannaan oo qiyaastii 200 cu ah. arag kaas oo awood u leh inuu soo saaro cabitaanka calafka. Enzymes Gastric ee bakaylaha waa mid aad u firfircoon marka la barbar dhigo xayawaanka kale. Fiber, kuwaas oo dhegaha la wada baabbi'iyey, caloosha ma dheefshiido, waxaa loo diraa mindhicirka.
Soo ogow wixii aad sameyn laheyd haddii bakteeriyadu hindhiso, haddii bakeyladu ay yeeshaan calool xanuun, haddii bakeylku uu qabo shuban, ama caloosha, haddii uu bakaygu leeyahay timo, haddii bakaygu uu indhaha u ilmeeyo.
Residues of food in caloosha ma ay u suurtagashay in ay galaan mindhicirka, fulinta hababka ugu dambeeya ee dheefshiidka.
Jidhka waxaa matalaya:
Xiidmaha yar, oo ku hawlan burburinta walxaha, oo ay ku jiraan amino acids, oo si toos ah ugu galeysa dhiigga.
Xiidmaha waaweyn, oo ku hawlan hannaanka hargabka. Cuntada aan la kala qaybin oo dheefshiidin, waxay soo baxdaa hoosta saxarada, qadarkeeda - 0.2 g maalintii. Maalintii, saxarada waxaa lagu gartaa foom adag, habeenkii - jilicsan. Xayawaanka habeenkii la soo dhaafay, xayawaanku waxay cunaan, sababtoo ah waxay helayaan borotiinnada lagama maarmaanka ah, fitamiinada K iyo B.
Maydhayaasha neefta ee ku jira bakayle waxay ku jiraan sanka, cunaha, trachea iyo sanbabada, kuwaas oo u oggolaanaya in jidhku siiyo oksijiinka. Cadaadiska hawada, sanka waxaa la kululeynayaa, qoyan yahay, nadiifin ah. Kadibna wuxuu ku bilaabmaa horumarka uu ku galo faryarada, trachea iyo sanbabada.
Baro sida loo doorto bakayle marka la soo gadanayo, sida saxda ah loo ogaado da'da kaniisada, inta badana bakeyaalku waxay ku nool yihiin celcelis ahaan.
Neefsashada qumbaha waa la kordhiyaa marka la barbar dhigo naasaha kale. 280 neefta daqiiqad kasta ayaa loo arkaa inay caadi tahay. Ushastik ayaa dedejisay geedi socodka sarrifka gaasta: isticmaalka qiyaastii 480 mitir dherer. cm oo oxygen ah, waxay soo saaraan 450 cu. cm carbon dioxide.
Shakhsiyaadka waxay leeyihiin dareenka noocaas ah:
Kiniintaas oo suurtogal ah in ay ka dhalato unugyada rijeetada ku qoran ee ku yaala qoto dheer ee sanka. Unugyada ayaa leh 11 xabbo oo ka jawaabaya noocyada kala duwan ee dhadhanka. Waad ku mahadsan tahay dareenka urta, shakhsiyaadka ayaa dooranaya qof kale oo wadaagaya, oo haweenkuna waxay kala soocaan qoyskooda shisheeyayaal.
Dhadhamioo qabta ibta naaska oo daboolaya carrabka.
TaabashoWaxqabadka taas oo ka dhacda ka qaybgalka maqaarka xasaasiga ah, oo ku yaal indhaha, dibnaha, dhabarka iyo wejiga. Thanks to dareenkan, xayawaanku waxay isku dayi karaan inay meel bannaan u istaagaan, waxay dareemaan dhibco heerkulka iyo ka ilaali kulaylka, ka jawaab celinta xanaaq badan. Thanks to antennae, xayawaanku waxay u guuri karaan habeenkii marka qafisku gebi ahaanba madow yahay. Timaha kor ku yaal ee indhaha ayaa u oggolaanaya bakaylaha inay u socdaan oo ay dareemaan caqabadaha.
Aragtitaas oo ay bixiso indhaha, oo ka kooban indebaal qaab muuqaal ah, oo ku xiran maskaxda. Khamriga ayaa kala soocaya midabada, iyo muuqaalka aragtida waa aragti xoogan iyo suurtogalnimada jihayntu ku jirto mugdiga.
Dhegeysi, sababtoo ah dhegaha waaweyn, taas oo u oggolaanaya bakayleyda inay aqoonsadaan oo aqoonsadaan dhawaaqyada si fiican.
Nidaamkan jirka ee bakaylaha wuxuu ka kooban yahay xubnaha taranka iyo kaadida. Ururku waa lagama maarmaan si loo tirtiro alaabta ka soo baxa jirka. Qadarka kaadida ayaa si toos ah ugu xiran da'da iyo nafaqada xayawaanka. Maalinba hal qof ayaa soo saari kara wax ka badan 400 ml oo kaadi ah. Nidaamka kaadida ayaa ku yaal meel aad u dhow jeebabka.
Ma taqaanaa? Xidhiidhka u dhexeeya xayawaanka ayaa suurtagal ah sababo la xiriira dhawaaqyada sare. Si loo qabsado qaar ka mid ah shakhsiyaadka, shakhsiyaadka waxay u kala rogi karaan dariiqooyinka kala duwan.
Lamaanayaashu waxay leeyihiin laba buruun oval, oo ku yaalla gobolka lumbar waxayna lagama maarmaan u yihiin geeddi-socodka kala-soocidda borotiinka, cusbada macmalka iyo walxo kale.
Dhisitaanka kaadida ayaa si joogto ah u dhacda, kelyaha, waxay galeysaa qufacayaasha, ka dib markaa waa la iska daayaa. Midabka caadiga ah ee dareeraha qulqulaya waa midabka huruudka ah, jaalaha ama cagaarka kaadida ayaa loo arkaa calaamad cudurka.
Waxaa jira farqi jinsi cad oo u dhexeeya labka iyo dheddigga. Ragga waxaa ku jira 2 tijaabo, maro kala duwan, qanjidhada gaariga, guska. Iska ilaali xubnaha jinsiga
Nidaamka dhalmada ee dheddigga waxaa matala ilmo-galeenka, ugxan-sidaha, xayawaanka, xubinta taranka, iyo furitaanka xubinta taranka. Kobaca ukunta ayaa ku dhacda ugxan-sidaha, geeddi-socodka qoollada, waxaa lagu qaadaa qashinka.
Baro sida loo go'aamiyo jinsiga carabta, sida loo yareeyo bakaylaha guriga, marka aad u oggolaan karto bakayleka in la xoqo, intee in le'eg ayay qaadataa, iyo sida loo go'aamiyo sonkorta ee bakaylaha, sida loo quudiyo bakeylka kalkaalinta ka dib raashinka.
Ilmo-galeenka wuxuu leeyahay qaab laba-gees ah, sidaa daraadeed haweenku waxay qaadan karaan 2 litters oo ka imanaya laba labood oo kala duwan hal mar, geeddi-socodka uurku wuxuu bilaabmaa 12 saacadood ka dib markaad mala. Qaybaha galmada ee bakeylka qaangaarka
Bakteeriyada qanjirka 'endocrine' waxay ka kooban yihiin qanjidhada, qanjidhada, finiiniga, pancreatic, qanjidhada adrenal, testes iyo ugxansiisyada. Hormoodyada hormoonka laga sameeyay ayaa markiiba galaan dhiigga, iyada oo aan macquul aheyn in laga tago jirka.
Qanjirrada adrenal waxay ku shaqeeyaan xakamaynta biyaha iyo dheef-shiid kiimikaad, taas oo ay ugu wacan tahay qanjirka pituitary, soosaarka hoormoonka aasaasiga ah. Haddii ay jiraan wax isbeddel ah tirada qanjidhada iyo shaqada, tani waxay keenaysaa dhibaatooyinka koritaanka iyo horumarinta shakhsiyaadka.
Baro sida loo dhaliyo bakaylaha guriga, sida loo sameeyo maqaarka bakayle.
Sidaa daraadeed, in si faahfaahsan loo barto anatomy ee bakayle, milkiilayaasha beeraleyda ayaa go'aamin kara waqtiga jiritaanka xaalad kasta oo aan caadi ahayn ee xayawaankan si loo isla markiiba uga jawaabo oo loo bilaabo daaweynta.